Nagu saabsan - S-conning Technology Group Ltd.
S-conning Technology Group Ltd, waa mid ka mid ah soo saareyaasha mashiinada xirfadleyda ah, oo la aasaasay 2010, warshadu waxay daboolaysaa aag 5200㎡ ah, oo si gaar ah loogu heellan yahay Qalabaynta Gawaarida Gaarka ah ee Gaarka ah iyo wax soo saarka warshadaha.
Awoodda R & D ee xoogga leh iyo nidaamka tayada sare, S-conning Tech waxay xoojineysaa suuqgeynta caalamiga ah ee kala duwan: Nidaamka calaamadeynta iyo mashiinka wax lagu duubo ee cirbadaha la iska tuuri karo 、 Xawaare sare & saxan sax ah oo sax ah oo loogu talagalay warshadaha dawooyinka, Cuntooyinka & Cabitaanka warshadaha, qurxinta iyo warshadaha kiimikada maalinlaha ah .
S-Conning waa xubin xubin ka ah ururka qalabka dawooyinka ee Shiinaha, Shiinaha soosaarka dardaro dardaro iyo xubin ka mid ah ururka isugeynta thermoforming, xubin ka tirsan ururka warshadaha isqurxinta ee Guangzhou ， iyo xubin ka soo saarida shuruudaha guud ee farsamada ee mashiinnada sumadda is-koolo. Waxaan ku guuleysanay shahaadooyin badan, sida "shirkad cusub oo tiknoolajiyad sare ah", "Guangzhou sayniska iyo tiknoolajiyadda hal-abuurnimada shirkad yar oo weyn", "2016 abuurista shatiyada ganacsiyo suurtagal ah", "Shirkadaha jaangooyooyinka wax soo saarka amniga" iyo wixii la mid ah. Shirkadda ayaa ka gudubtay shahaadada nidaamka tayada ISO9001 & shahaadada CE.
S-conning Tech waxay ku hawlan tahay cilmi baaris weligeed ah warshadaha automatization, hal-abuurnimo tikniyoolajiyad waara oo ku wajahan is-habeyn heer-sare ah ， waxaan ku faaneynaa mashiinkeena tayada sare leh ee ka shaqeeya in ka badan 100 dal oo aan ku raaxeysaneyno sumcadda aan caadiga aheyn, iyadoo la sii ballaadhinayo baaxadda wax soo saarka, S-conning had iyo jeer waxay u heellan tahay sidii loogu dadaali lahaa mashaariic faa'iido badan looga helo joogitaanka caalamiga ah ee shirkadaha caalamiga ah.
Waxaan haynaa 5 koox oo caalami ah sales
• Afrika, bariga dhexe
• Waqooyiga & Koonfurta Ameerika
Dhammaan su'aalahaaga iyo shakigaaga waxaa lagu hagaajin doonaa kooxda iibinta saxda ah iyadoo loo eegayo waddankaaga ama waddanka uu mashruucu ku yaal. Koox kasta oo wax iibisa waxay leedahay Maareeye Qaybeed, Maareeyayaasha Iibka iyo Wakiillada Iibinta, oo dhammaantood leh khibrad ballaadhan oo aqoon leh - keliya maahan xalka wax soo saarka laakiin sidoo kale suuqaaga.
Supp Alaab-qeybiyeha TOP 3 ee suuqa Shiinaha - halkaas oo aan ku fiicneynno mashiinka calaamadeynta, mashiinka wax lagu duubo.
Member Xubin ka tirsan ururka qalabka dawooyinka ee Shiinaha.
Supp Alaab-qeybiyeha OEM ee dadka kale shirkadda hoggaamineysa warshadaha mashiinnada.
Xubin xubin ka ah shuruudaha guud ee farsamada ee mashiinnada calaamadeynta isku-dhejiska ah.
Member xubin ka tirsan ururka warshadaha is-qurxinta ee Guangzhou.
Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Top Iyo Labeler Labeler, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi,